Saameynnada Dhinacyada ah Markaad Adeegsaneyso CBG
Dhibaatooyinka ay keento marka la isticmaalayo CBG
31 Oktoobar 2020
Daraasad ayaa muujisay taas CBG waxay wax ku ool u tahay daaweynta astaamo kala duwan. Tusaalooyinka xaaladaha CBG ay si gaar ah waxtar ugu leedahay waa glaucoma, kansar, cudurka Crohn iyo cillad maskaxeed. Laakiin waa maxay waxyeelooyinka daawadani?
CBG waxaa loo isticmaalaa gargaarka xanuunka iyo wakiilka ka hortagga bararka ee cuduro badan ama xaalado badan. Waxaan horey u qornay maqaal ku saabsan kartida CBG. Hase yeeshe wax yar baa laga ogyahay waxyeellooyinka soo raaca. Maxaad ku xisaabtantaa markaad bilawdo isticmaalka dawadan?
Dhibaatooyinka ay keento CBG
Wax yar ayaa laga ogyahay dhibaatooyinka soo raaca ee saliida CBG ama noocyada kale ee CBG. Tijaabooyinka xayawaanka waxaa lagu sameeyay jiir iyo jiir, laakiin wax yar baa laga ogyahay waxyeellooyinka ka iman kara ee uu ku yeelan karo aadanaha. Xaqiiqdii kuma jiraan dawooyinka kale, fiitamiinnada ama kaabisyada kale. Haddii aad rabto inaad isticmaasho daroogada, waxaa ugu wanaagsan inaad marka hore la tashato dhakhtarkaaga. Ha u joojin qaadashada wax daawo ah si aad ugu isticmaasho saliida CBG ilaa bixiyaha xanaanada caafimaadkaagu kuu sheego mooyee. Daawooyinka had iyo jeer kujira digniinta oo aan la jaan qaadi karin isticmaalka CBG waa:
antibiyootikada iyo antimicrobials
dawooyinka cillad la'aanta kacsiga
Daawooyinka caloosha (GI), sida daaweynta cudurka 'gastroesophageal reflux disease' (GERD) ama
daawo loogu talagalay laxanka wadnaha
daawooyinka niyadda lagu daaweeyo walwalka, niyadjabka, ama cilladaha niyadda
daawooyinka qanjirka 'prostate'
Miyaad khibrado wanaagsan ama xun ku leedahay CBG naftaada? Nala wadaag!
Akhri wax dheeraad ah healthline.com (Source, EN)
Isticmaalka CBD wuxuu horseed u yahay waxqabadka isboorti ee ka dhex jira ciyaartooyda Kubadda Cagta Mareykanka
Waxaa jira doodo badan oo ku saabsan waxa loo oggol yahay dadka ku nool adduunka isboortiga inay adeegsadaan si ay u horumariyaan waxqabadkooda isboorti.
Komishanka qaramada midoobay hada uma arko xashiishka inuu yahay maandooriye khatar ah
Komishanka daroogada mukhaadaraadka (CND) wuxuu diirada saarayaa ka takhalusida marijuana iyo waxyaabaha laga helo ...
Ka saar xummadda cagaarshowga leh dhibicda CBD
Guga kasta wuxuu mar kale u bilaabmaa dad badan: sanka oo dareera, indhaha cuncunka cuncunka ka ...
Aad iyo aad u badan koritaanka gadhka ragga maalmahaan qabow. Ka waran CBD daryeelka gadhkaaga?
Mashruuca Sorento: Booliska Canada waxay dhexgalaan $ 2 milyan oo alaab xashiish sharci darro ah iyo lacag caddaan ah